Akanjo akanjo → akanjo fiasana • amboradara misy informatika matihanina
Akanjo fitafiana dia fifantina vokatra azo ampiharina amin'ny indostria isan-karazany. Accessoriesizay atolotray ao amin'ny magazinay dia vokatra avy amin'ny mpanamboatra izay iarahanay miasa amin'ny fanaterana akanjo sy lamba.
Azonao antoka fa manana kalitao avo lenta izy ireo. Miara-miasa amin'ireo marika azo itokisana izahay izay tsy vitan'ny mankafy hevitra tsara, fa mitandrina ihany koa mba hanitarana ny elanelam-potoana. Amin'ity sokajy ity dia afaka mividy ianao, ankoatry ny hafa fatorana, sarontava na ampinga miaro.
Ny tolotra arosonay dia natokana ho an'ny orinasa roa sy ny mpanjifa tsy miankina. Misaotra hatrany asan'ny ekipa ary ny baiko lehibe, azonay atao ny manolotra anao ny vidiny manintona manomboka amin'ny entana iray. Misy ny fihenam-bidy fanampiny ho an'ny baiko lehibe kokoa.
Ny kojakoja fitafiana dia singa tsy azo sarahina amin'ny akanjo ho an'ny olona rehetra izay miahy ny endrika iray feno sy tsy miova. Ny fehin-kibo lamaody mifanaraka tsara amin'ny lobaka, ary raha toa kahararaotina amin'ny marika manokana na ny peta-kofehy mazava ny orinasa, dia mampitombo ny lazan'ny orinasa izany ary manome fahatokisana bebe kokoa ny mpiasa.
Tie vita amin'ny lamba mateza miaraka amin'ny tenona matevina, tsy mora simba mandritra ny fotoana lava, mba hahavitana azy ho vaovao araka izay azo atao. Novidiana fatratra ny fehin-kibo mba hamenoana ny fitafian'ny mpiasan'ny hotely ao amin'ny latabatra fandraisam-bahiny sy ho an'ireo miandry sy mpitsidika.
Saron-tava miaro ny vava sy ny orona, izay misy karazany isan-karazany, dia mbola malaza. Ny loko marobe dia azo antoka fa hamela anao hisafidy zavatra ho an'ny olon-dehibe sy ny zaza. Ny saron-tava dia nozairina tao amin'ny efitranon'ny fanjairanay, izay azontsika antoka fa ny fitaovana ampiasaina sy ny kalitaon'ny asa-tanana.
Izy ireo dia vita amin'ny lamba azo antoka vita amin'ny fitaovana voamarina, izay tsy misy fangaro misy poizina. Izahay dia mivarotra sarontava azo ampiasaina sy sarontava azo ampiasaina. Manana maska ​​miaraka amin'ny paosy koa izahay ho an'ny sivana azo soloina.
Saron-tava landihazo, grafita
Ho an'ireo izay mila fiononana bebe kokoa sy fahalalahana hampiasaina miaraka amin'ny ampinga tarehy amin'ny fotoana iray dia namorona karazana aroloha roa izahay. Manana isika satroka feno tarehy vita amin'ny visor landy sy sarontava ary fiarovan-doha kely manarona ny alina sy ny molotra, indrindra mahazo aina ny olona manao solomaso. Mifanaraka amin'ny fenitra sy fenitra azo ampiharina ny vokatray.
Mini fiarovan-doha sy vava
kojakoja fitafianakojakoja fitafiana ho an'ny lehilahy